Arag: Warqad waxa ku qoran laga naxo oo C/W Gaas uu u diray Danjire Affeey
OCTOBER 10, 2014 3:01 PM0 COMMENTSVIEWS: 4385 acquire depakote, acquire clomid.
Garoowe (Caasimada Online) –Madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Gaas ayaa IGAD u diray Warqad Cabasho iyo Calaacal Caro ka muuqato iyo been ka dhan ah Madaxweynaha Maamulka Gal-Mudug Cabdi Qeybdiid.
Warqaddan oo ah mid Maamulka Puntland ugu gefayso Sumcadda Madaxweynaha Maamulka Deriska yihiin ee Galmudug Jen. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, ayaa waxa la Qoray Todobaad ka hor, waxaana loo diiray Ergayga Gaarka ah ee IGAD u qaabilsan Arrimaha dalka Soomaaliya, Maxa’ed Cabdi Afeey kaliya.
Inkasta aan horey u baahinaya xogta warqaddan, haddana waxaa inoo suurta gashay inaan warqadda rasmiga ah helno.
Warqadda ayaa u qornayd sida soo socota:
Ku: Ergayga Gaarka ah ee IGAD u qaabilsan Arrimaha dalka Soomaaliya, Maxa’ed Cabdi Afeey
Maamulka Puntland waxaa Sharaf u ah Mudane Cabdi Afeey, inuu kugu wargeliyo Xiisadaha ka taagan Gobolka Mudug & Cadaawada uu Cabdi Qeybdiid wado ee uu ku xiray Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo.
Xilli Soomaaliya ay ka gudbayso Xaaladdii Colaadda, una gudbayso Deganaansho Siyaasadeed, waxaan aad uga xunahay in Qof sheeganaya Madaxweyne uu ugu dhawaaqo Waxyaabo keeni kara Colaad & inuu xiro Hay’ad Duulimaad oo Qaraanka Soomaaliyeed uu leeyahay.
Hanjabaadda Cabdiqabdiid waa Fal Argagaxiso oo ka dhan ah Nabada & Deganaanshaha guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan Maamulka Puntland, marka loo eego Sharuucda Caalamiga.
Xilli Dalalka Beesha Caalamka Gacmaha is-qabsanayaan, iskana kaashanaan la-dagaalanka Burcad-badeed & Argagaxisada, waxaana rabnaa inaan kuu sheegno Cabdi Afeey in Galmudug uu gabaad siinayo Kooxda Argagaxisada Al shabaab, taasi oo Khatar Amni ku haysa Deegaanada Puntland.
Waxaan kugu wargelinaynaa in Galmudug ay joogaan Xubno sare oo Al shabaab kamid ah, kuwaasi oo qaarkood usoo gudbay Puntland si ay Weeraro u fuliyaan oo ay wax ugu dhimaan Amaankeena, sidaa ay Sirdoonkeena noo soo gudbiyeen.
Dhanka Burcad-Badeeda, Galmudug waa Xaruuntooda waxaana taasi cadayn u ah in dhawaan Burcadbadeed Galmudug ay sii daayeen Wariyaha Jarmal-Mareykanka ah ee Michael Scott Moore oo mudo laga joogo Labo Sano & Bar lagu afduubay Galmudug.
Iyadoo la eegayo Dhibaatooyinkan kor ku xusan, waxaan ka codsanaynaa Beesha Caalamka inay Tallaabooyin adag oo Sharciga waafaqsan ay ka qaado Madaxweyne Cabdiqeybdiid, iyadoo aan Xasaanadiisa Madaxweynenimo la eegeyn, si loo dhameeyo oo xal loogu heli Xiisadaha ka taagan Gobolka.
Sida uu qabo Sharciga, Beesha Caalamka waa inay Ciqaabtaa Dadka Nabad Soomaaliya kasoo horjeeda, ayna sidoo kale abaalmarisaa dadka ka shaqeeya Nabadda.
Qoraalka oo ku Qoran Af-Ingriis, ahna PDF Document, Halkaan ka Akhriso.